Umthengisi we-IronTech Doll oSebenzayo uBungakanani boBomi oDoli bathenge kwi-Intanethi
Ixesha elilinganiselweyo Intengiso eshushu -Lana Booty 159CM iSexy Beauty Irontech Dolls
I-Silas-155CM B indebe ye-Shemale Doll Blue Amehlo amaPenisi amakhulu eTPE oDoli
IJoJo-Ukutyeba kakhulu oSebenzisana naye oLunge kakhulu kwi-Ass sex Doll Irontech Doll
I-Hamilton-158CM Ibhombu enzima Amabele amakhulu alwa ne-BBW ye-Anime ye-Anime yesini
I-Annabelle-Amabele amakhulu i-158CM yabantu abadala i-TPE Irontech Dolls
Annabelle 166 CM C-Cup Irontech Love Doll Iinwele eziGolden ezinde isitayile saseYurophu kunye neMelika enesidima Unodoli weSilicone onesini
Dior-Amabele amakhulu 168CM TPE Uthando lweIrontech Dolls
Umzimba kaNancy Enchanting weSilicone Irontech Doll 158cm E-Cup Round Breasts Libido Abasetyhini abakhulelweyo abakhulelweyo Amehlo aMelancholy bathanda oonodoli abathengiswayo
Umbala weLeanna weWheat yeSilicone ye-Irontech unodoli we-165cm ye-G-Cup enomtsalane weModeli yoMzimba oNzulu weCleavage yoMzimba onobuhle obufana noonodoli bokwabelana ngesondo
I-Misa Deep Cleavage Silicone Irontech Doll 166cm C-Cup ye-Sensual Fat Butt IQinisekisa ngokupheleleyo Imibala edumileyo yamabele amabele aSexy afana noonodoli bezesondo
UMinus Lola S-curve Umzimba we-TPE Unodoli we-Irontech 163cm C-Indebe iNkangeleko eLungileyo yoMzimba oFanelekileyo wamanqatha amanqatha aPlump kunye noonodoli bezesondo abaqinileyo bayathengiswa.
Imodeli enomtsalane yeWrenley yoMzimba we-TPE we-Irontech unodoli we-161cm we-E-Cup Slim esinqeni iimpundu ze-Peerless Breasts zoMzimba owahlukileyo oonodoli bothando bayathengiswa.
UBarbara uSeductive Body Shape TPE Irontech Doll 168cm C-Cup Enchanting Figure Imodeli yokwenyani eQilileyo yeSex Goddess Lifelike Sex Dolls
Monroe 175cm Irontech Doll Head Charles bronze TPE Sex Doll
Adelaide 164CM E-Cup Irontech No.
I-Ada- i-150CM B indebe eNgelosi emhlophe uMongikazi oMnyama ulusu lwe-TPE yesondo i-Irontech Doll
UMarie Innocent Cute Love Doll E-Cup Naughty TPE 159CM Iinwele ezinde ezimnyama
I-Oaklee Boutique yokulinganisa ubuso boBomi bokwenyani unodoli we-E-Cup elula ye-TPE 159CM Amehlo amakhulu
UChristina Nude Unodoli othandekayo othandekayo D-Cup Bold TPE 160CM Okwenyani wePonytail
I-Malaysia Angel girl I-Sex Dolls iyathengiswa i-D-Cup amehlo aBrown TPE 160CM Playful
Ellis imbonakalo eSexyUthando Unodoli we-F-Cup weBasketball ingelosi TPE 161 CM Gentle
UIrene Iinkcukacha zomzimba othambileyo oonodoli abaThengisiweyo nge-E-Cup ecingisisayo nge-TPE 164 CM African American
U-Anne Long Brown weNwele ezithanda unodoli we-E-Cup Smooth Dark Skin TPE 164CM ehloniphekile
Umzuzwana we-Anahi wokwenyani womdlalo owenziwe ngoonodoli bezesondo bayathengiswa E-Cup Witty TPE 164CM ulusu olumnyama olumnandi Intombazana entle eneenwele ezinde eziphotheneyo
UMara ulusu olumnyama amabele amakhulu oonodoli abanjengoBomi beSex E-Cup Brown iinwele ezinde TPE 164CM Ubuhle obuncumayo
I-Rhea Amabele amakhulu atyebileyo iimpundu Oonodoli bezesondo abangabizi mali ye-E-Cup Iinwele ezinde ezigobileyo TPE 164CM isitayile sefashoni yakudala
UDavina Ukubuyiselwa kobomi bokwenyani Boonopopi beSex B-Cup Inwele ezibomvu ezinde iSilicone 168CM umbala wengqolowa
Iimpundu ezityebileyo zaseDallas ezigcweleyo ziqinile Oonodoli bezesondo ezitshiphukileyo E-Cup Umfazi okhulelweyo omhle uSilicone 158CM Amehlo aBlue
Umphefumlo kaJayda ohendayo oonodoli obufana nesondo be-G-Cup Rose isilingo seSilicone 165CM Imilebe ebomvu eyinyani
UMariam Round amabele amakhulu oonodoli bezesondo abancinci G-Cup Deep cleavage Silicone 165CM Brown iinwele ezinde eziphotheneyo
Intombazana yase-Skyla Erotic intombazana enobomi obufana noonopopi be-G-Cup Amehlo aluhlaza okwesibhakabhaka eSilicone 165CM iinwele eziBlond
Umgangatho wokuqala we-Irontech Dolls weSondo ongenaxabiso
Ngo-2022-Siziingcali ngakumbi malunga nokusetyenziswa kunye nenkcazo yoonodoli be-Irontech
Ukusetyenziswa kwexesha elingcono kunye nexesha elide, nceda ufunde le ncwadana ngononophelo ngaphambi kokuba uyisebenzise. Intshayelelo kanodoli wesondo: Unodoli weIrontech yenziwe ngeTPE (ekwabizwa ngokuba yiCyber-skin) kunye namathambo esinyithi aguqukayo. Izinto eziphathekayo zihambelana nokusingqongileyo kwaye zisempilweni, kwaye zisetyenziswa ngokubanzi kwiimveliso zabantu abadala eziphezulu. Unodoli omde kune-100cm unomlomo ogcweleyo osebenzayo, i-anus kunye ne-vagina. Umngxuma wokukhupha ilindle kunye nelungu lobufazi zakhiwe ngokusebenzisa umngxuma wokukhulula umfazi wokwenene. Kwaye ulwakhiwo lwangaphakathi lwemingxuma luyafana nolwakhiwo lomzimba womntu. Xa usenza uthando nonodoli, uya kuziva ukuba indawo yakho yangasese ifunxa xa ingena nzulu ngokwaneleyo. Oonodoli banokwenza uninzi lwezenzo ezinokwenziwa ngabantu kwaye bade bamise iindlela zokuma ezingenzekiyo ebantwini.
Imibuzo ebuzwa rhoqo kunye neempendulo onokuthi unazo malunga ne-Irontech Doll ngo-2022
1. Ngaba amehlo angashukunyiswa?
Iibhola zamehlo zinokulungiswa. Cinezela phantsi iliso kancinci ngomnwe wakho kwaye emva koko unokuhlengahlengisa iliso kwiindlela ozifunayo.Kulumkele ukulimaza i-eyelash yedoli.
2. Indlela yokujongana namanqaku oxinzelelo?
Sisebenzisa izinto ezichasene noxinzelelo lwesikhumba, ulusu lukanodoli lunzima ukuvelisa amanqaku oxinzelelo. Ukuba kuyenzeka, nceda ukhulule uxinzelelo okwethutyana, luya kuzibuyisela ngokwalo. Ukuba ayifumanekanga okwethutyana, nceda usebenzise itawuli emanzi efudumeleyo egquma indawo yamanqaku oxinzelelo okwethutyana kwaye uyenze ngokuphindaphindiweyo, oku kuya kunceda ukususa amanqaku oxinzelelo.
3. Indlela yokulungisa ulusu olonakeleyo?
Ukuba uyonakalisa ulusu loonodoli, nceda usebenzise iglue yethu ekhethekileyo yokulungisa ukulungisa. Ngenxa yezithintelo zokuthumela ngenqwelomoya, asikwazi ukuyithumela kunye nonodoli. Nceda uthenge iglu ngabanye kuthi ukuba uyayifuna. Ukuba umonakalo omkhulu wengingqi uveliswa, nceda uqhagamshelane nenkonzo yabathengi ngoncedo.
4. Ngaba ndingakwazi ukubuya nditshintshe?
Njengoko imveliso inezinto zomntu, asikwamkeli ukubuyiswa kwempahla. Zonke iimveliso zithunyelwa ngaphandle kuphela emva kovavanyo olungqongqo. Ukuba iingxaki ezisemgangathweni zifunyenwe, nceda uqhagamshelane nenkonzo yabathengi phakathi kweentsuku ezintathu emva kokufumana iimpahla.
2022-2023 Oonodoli bezesondo abancinci abalinde ukuba ufumane
Ukuba ufuna ukufumana oonodoli besondo abancinci, cofa apha Iidoli ze-UR, uya kufumana izinto ezimangalisayo ezingalindelekanga, ukuba ufuna ukuthenga i unodoli wesondo ngeyona mali incinci, nqakraza nje kwi isondo unodoli torso ukufumana isithandwa sakho samaphupha.
Igama lebrand:Unodoli weIrontech
Material: Iidoll zesini ze-TPE Uhlobo: Oonodoli bezesondo beBBW, oonodoli baseJapan, oonodoli baseYurophu, onodoli abakhulileyo ngokwesini, njalo njalo.
Intshayelelo: Idoli yaseIrontech inayo yonke into kubafazi bokwenyani: ithambile, ilungisiwe, isikhumba esirhabaxa, kunye nomzimba oxhonywe ngokupheleleyo kumathambo esinyithi. Isondele kwimfezeko ngokwembono, isandla kunye nokuchukumisa. Iidoli zeIrontech Doll zikumgangatho ophezulu zothando zodoli ezenziwe kwaye zibunjwe nge-TPE. Ngeempawu ezimangalisayo kunye nobuhle obungenakuthelekiswa nanto. Uhlobo lwentengiso lujolise ekoneliseni ukufuna kwabantu ubuhle.
+ Zonke iidoli zenziwe ngokwezifiso ngokupheleleyo
+ Ubuso obuthandekayo nobukhethekileyo
+ Ubufazi obuethe-ethe kunye nobokwenyani
+ Umzimba okwenyani kunye nezinto ezikumgangatho ophezulu
+ Intombazana endala entle entle eneempawu zasentshona
+ Ubuhle ngeemodeli zabasetyhini okanye iimodeli zemagazini yefashoni
+ Ubuso obulinganiswe kakuhle kunye nabalinganiswa banobungakanani obuhambelanayo
Uhlobo lwayo olwahlukileyo alunakubhenela wonke umntu
-Uhlobo olutsha loonopopi luhlaziya kancinci
Iidola ezi-141cm zeIrontech
Iidola ezi-145cm zeIrontech
Iidola ezi-150cm zeIrontech
Iidola ezi-153cm zeIrontech
Iidola ezi-155cm zeIrontech
Iidola ezi-156cm zeIrontech
Iidola ezi-157cm zeIrontech
Iidola ezi-158cm zeIrontech
Iidola ezi-159cm zeIrontech
Iidola ezi-161cm zeIrontech
Iidola ezi-163cm zeIrontech
Iidola ezi-165cm zeIrontech
Iidola ezi-168cm zeIrontech
Iidola ezi-170cm zeIrontech
Malunga nokuveliswa kweedodoli zesini, mhlawumbi kukho le miba ilandelayo. Eli nqaku liza kuchaza ixesha elidlulileyo kunye nelikhoyo lawa maDoli othando ukusuka kwimiba yemvelaphi, ukusasazeka kunye nokuphuhliswa kweedoli zesini, kunye nomzekelo wangoku. Indawo ethile yoonodoli bokuqala besini--...
Ukulungelelanisa umzimba ongezantsi kunye nokuphakamisa i-tights, ngeli xesha, enye ingxaki ivela. Kukho intsimbi-efana ne-protrusion kumnyango ongasemva. Oku kujongeka ngathi iza kufakwa kwichrysanthemum yam, kodwa ndisandula ukusebenzisa lonke ulwelo lokuthambisa. Kwafuneka ndilume imbumbulu kwaye ndiyityhale ...
Kodwa nokuba yintoni na, ndaphakamisa ihood, ndaphefumlela phezulu, ndafaka intloko yam kwihood. Kwandithatha ixesha ukulungelelanisa amehlo nempumlo nemingxuma yempahla yentloko, umlomo wawuvulekile, ndiluma lo cylinder kangangokuba umlomo wam wawungathi uvuleke indlela yonke, ndizijonge esipilini, ndandibona ithonga lam. ..
Tsala phezu kwamadolo, ulungelelanise ulwalathiso lwamathanga ngokuthe ngcembe kwaye ngononophelo, kwaye uzame ukwenza imigca yeesokisi ihambelane ukuze ugweme amabala. Ndithe xandifika ekrwada ndaya kukhangela itip encinci le bendicinga ukuba igcina idick kodwa ndayifumana isemva. Ukuba bekungengenxa ye...
Iidoli zesini esiflethi esisicaba